15% Discount Buffet
15% Discount Buffet အသေးစိတျ
ပရိုမိုးရှငျး PullMan Centrepoint Hotel
ရန်ကုန်မြို့ Down Town area မှာရှိတဲ့ Pull Man Centrepoint Hotel မှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Buffet Item တွေကို အဝသုံးဆောင်ရင်း 15% Off Discount ရယူကြမယ်…
Pull Man Centrepoint Hotel ဟာမကြာမီသေးမီက ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ Down Town area ဖြစ်တဲ့ ဆူးလေဘုရားလမ်း နဲ့ ကုန်သည်လမ်းတောင့်မှာရှိတဲ့5Star အဆင့်ရှိ Hotel ပါ။5Star အဆင့်ရှိ Pull Man Centrepoint Hotel ရဲ့ The Merchant Restaurant မှာ နိုင်ငံတကာအစားသောက် Buffet ကိုအဝသုံးဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အစားသောက်ကြိုက်တဲ့ အသစ်ဆန်းကြိုက်တဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်ကတော့ တကယ်သတင်းကောင်းပါပဲ..
Pull Man Hotel ရဲ့ Buffet Type ကတော့ပုံမှန် ဘူဖေးပုံစံလို အကုန်ခင်းကျင်းပြထားတာ မျိုးမဟုတ်ပါဘူး.. Live Kitchen ပုံစံခင်းကျင်းပြသပီး International ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်စာဖိုမှူးများမှ ပူပူနွေးနွေးချက် ပြုတ်ပေးတဲ့အတွက်သန့်ရှင်းလတ်ဆန်မူ အပြင် အရသာကိုပါကြိုက်နှစ် သက်ရာပြောနိုင်တဲ့5Star quality အစားသောက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ Buffetတွင်ပါဝင်တဲ့ Menu တွေကတော့ SeaFood, Sushi, Chinese Food, Europe အစာတွေအပြင်အမျိုးစာစုံလင်တဲ့ Dessert တွေကအစအကုန်ပါဝင်ပါတယ်…
10% Off နဲ့ သွားရောက်သုံးဆောင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions ရဲ့ Coupon နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Mobile App လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားရောက်သုံးဆောင်ပေးရမှာပါ.. 10% Off ပေးထားတဲ့ Buffet Item တွေကတော့….
The Merchant Buffet
Price - USD 24.00 Nett Per Person (Every Monday, Wednesday, Friday, Saturday and Sunday)
Curry Dinner Buffet
Price – USD 19.90 Nett Per Person (Every Tuesday)
Chili Dinner Buffet
Price – USD, 19.90 Nett Per Person (Every Thursday)
Dinner Time –5PM to 10 PM
European Soul Food Lunch Buffet
Price – USD, 18.00 Nett Per Person (Every Saturday and Sunday)
Lunch Time – 12:00 PM to 2:30 PM
Buffet Item အစုံထဲကမှ ကိုယ့်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Buffet Item တွေကို နေ့ရက်လေးတွေနဲ့တိုက်ပြီး သွားဖို့တော့လိုမယ်နော်..
အရှေ့တိုင်း နဲ့ အနောက်တိုင်း Buffet ဟင်းလျာတွေကို အသင့်စားသုံးနိုင်သလို5star အဆင့်ရှိ ကျွမ်းကျင် စားဖိုမှုးတွေကိုယ်တိုင် ပူပူနွေးနွေး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ချက်ပြုတ်ပေးတဲ့ Live Kitchen မိမိတို့စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်မှာယူပြီး စားသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ အခုလို Promotion ရှိတဲ့ အချိန်လေးမှာ သွားရင် ပိုတန်တာမို့ လက်လွှတ်မခံစေချင်ပါဘူးနော်…
Pull Man Centrepoint Hotel ရဲ့လိပ်စာလေးတွေကတော့
Address – No.65, Coner of Sule Pogoda Road and Merchant Street, Kyauktada Township, Yangon.
Booking Your Table Now – 01 382687
ဒီ Buffet Item တွေကို 15% Off ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions Mobile App ရဲ့ စာမျက်နှာက Use Now ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး ကျလာတဲ့ Success စာမျက်နှာကို Bill မရှင်းမီ ပြလိုက်ရုံနဲ့တင် Promotions ကြီးကို ခံစားနိုင်မှာပါ။
PullMan Centrepoint Hotel ဆိုငျ
ဖုနျးနံပါတျ : 01 382687